အယ်ဖိုး: Ethical Hacking Basic Training
Ethical Hacking Basic Training
ဒါကတော့ wifi hacking tutorial များနှင့် hacking ရဲ့ သဘောတရားများ တော်တော်များများကို ရှင်းပြထားပါတယ်. ဒါက hack ဖို့တင် တင်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး. ဒီသဘောတရားကို နားလည်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကာကွယ် ရမယ်ဆိုတာကိုပါ တစ်ခါတည်း နားလည်သွားမှာပါ. ရှင်းပြထားတာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ. အရမ်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့ အခွေလေးပါ. မနည်းရှာထားရပါတယ်. ဘယ်သူမှ တောင်းဆိုထားတာ မဟုတ်ပါဘူး. ကျွန်တော် လေ့လာဖို့ ရှာလိုက်ရင်းနဲ့ ညီအစ်ကိုများလဲ လေ့လာစေချင်လို့ တမင်တင်ပေးလိုက်တာပါ. အားလုံး အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
Posted by Peace at 9:33 PM